Joojin Wadatashi Iyo Caleema-Saarka Suldanimo Ee Barkhad Cabdi Sheybe
Thursday October 05, 2017 - 13:07:31 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Anigoo run ahaanti gebi ahaan jeclayn inaan Ka hadlo amase dhex milmo habka dhaqanka foosha xun ee ficil ka reeraha. Kana duulla
Anigoo run ahaanti gebi ahaan jeclayn inaan Ka hadlo amase dhex milmo habka dhaqanka foosha xun ee ficil ka reeraha.
Kana duulla nidaam aqoon horumar hufnan dhaqanyahanimo, dowladnimo Xusbiyahanimo waxaan Ka adkeysan waayey khilaafka murugsan leh naxli huursan cadawaad Tol Iyo Gacal Beelweynteyda Adan Max'ed Oo aan horree loog...a baran dhaqan ahaan is khilaaf mandhaaf Saldaladeed. Iyo mid kale toona laysku mariyo Warbaahiinta.
Abtigey Ina Sanweyne wuxuu yidhi Gar Allee ayey taqaan Walalaal Inader Xigal Xidid Ma taqaan."
Sidaas darteed waxaan Beelweynta Adan Max'ed Adan Madoobe Aqoonyahan cuqaal Culimo, siyaasiin ugu baaqayaa digeyaa hala joojiyo Caleema-Saarka Suldanimo ee inaderkay Isla markaasna habaar-Wadaagey Chief Caaqil Barkhad Cabdi Sheybe.
Oo dhaliiyey fowdo siyaasadeed Kala fogeyn Beelweynta Adan Madoobe.
Madaama nin horree Suldaan Mustafe Max'ed Adan Weyne uu kaga horreeyey codsiga taageeradda ducada Beesha loona diidey sii aan gabaasho lahayn.
Isla markaasna Loo adeegsadey siyaasad mamuul dowladeed.
Taas Oo Beelweynta ku keentay Kala fogaan ila qurbejooga.
Waxa 'se ayaan darro ah ganacsade Chief Caaqil Barkhad Cabdi Sheybe mu garawsan mana u qaaddan muhiimda wadajirkii midnimadii Iyo Sumcadii Beelweynta lahayd uu ku hoggaamin jiray Awoowgii Haw naxariistee Caaqiil Sheybe taas Oo aanu dhammaan ku Beelweynu kuqadarin jirtay.
Isagoon Oo Caaqiil Barkhad Cabdi Sheybe ahayn weliba intii xeer astaan Lagu xuli jiray Caaqilada Beesha Dulqaad dood, Deeq haybad Iyo hibo Tol mideyn.
Waxa'se noo keenay Dumaal ahase ahaatee Maatada ayey Xaajo Tanasuul gobnimo u eektahay.
Xukuumad awood siyaasad Dowladeed abid HJ ama Adan Madoobe iskuma adeegsan.
Wana Taariikh ugub BeelweyntaAdan Max,ed ka dhasheen
Ragii lahaa Axmed Koorjaan Ina Shixiri Sallaan Carraabey Axmed Siilanyo Iyo kuwa kaloo badan.
Isku soo wada duubo waxaan taageersanahay go' aanka cuqaashii Odeyaashii adeeradey ilamaderadey Beesha Bahsan-Buur Adan Max'ed Oo mar horree Iyo mar dambee sii gacaltimo sharaf leh kor Iyo hoos uu sheegtay gartoodii una Soon bandhigey Beelaha Dan-Wadaagta Guud Iyo Xukuumadda Madaxweyne Xaaji Muj' Axmed Siilanyo.
Oo gebi ahaan dalku Ka dhaxlay Cuqaal Barar Sixir Barar nin ganacsi jeclaysi aan'se ku dhaqmin awood sharci fulin adag.
Cali C/laahi Ismaciil Dheeg